Azo antoka ve fa milamina ny ranomandry silicone? | Jingqi
Tonga ny fahavaratra, ary midika izany fa handany fotoana maharitra ianao amin'ny fiezahana hijanona mangatsiatsiaka.
Iray amin'ireo fomba haingana hamonoana ny ao anatiny: avy amin'ny ao anaty: tsy misy tahaka ny ranomandry mangatsiaka hidina ny mari-panaonao ary manampy anao hahatsapa aina amin'ny andro mafana.
Ny fomba tsara indrindra ahazoana an'io zava-pisotro mangatsiaka io dia miaraka amin'ny ranomandry, mazava ho azy. Cubed, ahontsina na hotorotoroina, ranomandry dia efa ela tsy fitaovam-piadiana handriny ny hafanana. Raha mbola tsy nandefa milina ranona ranomandry ianao tato ho ato, dia ho gaga ianao amin'ny safidy rehetra misy. Ny rano maimaim-poana dia asa tsotra tsotra, saingy misy ireo karazany samy hafa ny fomba hanatanterahana ny asa, avy amin'ny lalànan'ny plastika nentim-paharazana vita amin'ny silicone vita amin'ny vera vaovao sy ny mpanamboatra kioba.
Azo antoka ve ny làlan-jiro vita amin'ny plastika?
Ny valiny fohy: Miankina amin'ny hoe nividy azy io ianao. Raha roa taona mahery ny làlan-dranon-droa plastika misy anao, misy fotoana mety ahafahan'izy ireo manana bisphenol A (BPA) ao amin'izy ireo. Raha vaovao kokoa izy ireo ary vita amin'ny plastika tsy misy BPA, dia tsara ny mandeha.
Raha ny filazan'ny Food and Drug Drug (FDA) dia hita ao anaty fonosana sakafo maro ny BPA amin'izao fotoana izao, ao anatin'izany ny tavoahangy plastika ary ny fantson'ny sasany am-bavan'ny sasany. Io zavatra io dia miondrika amin'ny sakafo ary avy eo dia lany, izay mitoetra ao amin'ny vatana. Na dia manana endrika BPA farafaharatsiny aza ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny vatany, dia milaza ny FDA fa milamina izany amin'ny ambaratonga ankehitriny ary noho izany dia tsy misy ahiahy momba ny olon-dehibe.
Ny entana plastika maoderina dia manana isa eo amin'ny farany ambany izay milaza aminao hoe karazana plastika izany. Na dia matetika aza isika no mieritreritra momba izany raha toa ka azo raisina na tsia, io isa io dia afaka milaza aminao ihany koa ny haben'ny BPA mety ho hita ao amin'ny zavatra iray. Halaviro ny lasitra misy ranomandry sy ny fitoeran-tsakafo fitehirizan-tsakafo miaraka amin'ny isa 3 na 7 isaky ny azo atao, satria ireo no tena mirakitra ny BPA amin'ny haben'ny vola. Mazava ho azy, raha toa ka antitra ny lalanao dia tsy manana endrika recycle mihitsy izy ireo, saika manana BPA ao amin'izy ireo.